တ႐ုတ္ JD.com ႏွင့္ Shopify တို႔ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သည္ မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေန – Pandaily
တ႐ုတ္ JD.com ႏွင့္ Shopify တို႔ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သည္ မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေန
Jan 19, 2022, 11:18မနက် 2022/01/19 14:07:57 Pandaily
တရုတ် e-commerce ကုမ္ပဏီကြီး JD.comအေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြ ကမၻာ့ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံမွာ ကုန္ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ် ႏိုင္ဖို႔ ေအာ့ တ ၀ါ အေျခစိုက္ Shopify ကုမၸဏီနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။
JD.com သည် ပြည်တွင်း ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ အရင်းအမြစ် များကိုပေါင်းစပ် ခြင်းအားဖြင့် Shopify ကုန်သည် များအတွက် ပလက်ဖောင်း ကိုဖွင့် ပေးလိမ့်မည်။ JD.com International Logistics သည် တစ်အိမ် မှ တစ်အိမ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို ပေးလိမ့်မည်။
JD.com မှပြောကြား ရာတွင် အဆိုပါ သဘောတူညီ ချက်သည် Shopify ရှိ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များအား တရုတ်နိုင်ငံရှိ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ဝက်ဘ်ဆိုက် မှတစ်ဆင့် အရှိန်မြှင့် လိုင်း များ ကိုစတင် ရောင်းချ ခွင့်ပြု လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်သည် များသည် ၃-၄ ပတ်အတွင်း စတိုးဆိုင် များ ဖွင့် နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြား ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ စတင် ရောင်းချ ရန် ၁၂ လကြာ သည်။
JD.com သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် JD.com သည် မြောက် အမေ ရိ က၊ ဥရောပ ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ၊ အရှေ့ အလယ် ပိုင်း၊ သြစတြေးလျ နှင့်အခြား ဒေသများရှိ ကပ်လျက် တည် ရှိသည့် ဂိုဒေါင် ၈၀ ကို လည်ပတ် နေပြီး နိုင်ငံတကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်း ၁၀၀၀ နီးပါး ကိုတည်ဆောက် ထားပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၂၂၀ ကျော် သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:JD.com သည် CCTV Spring Festival Gala အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အဖွဲ့ ရှစ် ဖွဲ့ ကိုတည်ထောင် ခဲ့သည်
ယခင္က JD.com ၏ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ၏ အဓိက ပစ္မွတ္ မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳး တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေစ်း၀ယ္ စင္ ျမင့္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တီ ကီ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို ၾကည့္ လွ်င္ သိ ႏိုင္သည္။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် JD.com International သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်လီ လုပ်ငန်း ကိုအာရုံစိုက် လိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ကပင် JD.com သည်၎င်း၏ လွတ်လပ်သော လက်လီ အမှတ်တံဆိပ် Ochama သည် နယ်သာလန် တွင် စတိုးဆိုင် တစ်ခု ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Tags ∗JD.com | e-commerce platform | retail | shopify
China’s JD.com and Shopify Team Up to Serve Cross-Border Merchants
Chinese e-commerce giant JD.com has formedastrategic partnership with Ottawa-based Shopify to help U.S. merchants sell their goods in the world’s second-largest economy.
चीन JD.com और Shopify सीमा पार व्यापारियों की सेवा के लिए सेना में शामिल हो गए
चीनी ई-कॉमर्स दिग्गजJingdongअमेरिकी व्यापारियों को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सामान बेचने में मदद करने के लिए ओटावा स्थित शोपीफाई के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की।
ਚੀਨ ਦੇ ਜਿੰਗਡੋਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਚੀਨ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇJRJCਔਟਵਾ ਵਿਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰਡ ਸ਼ੌਪਿ ਨਾਲ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ.
চীন জিংডং এবং Shopify ক্রস সীমান্ত বণিকদের পরিবেশন করার জন্য বাহিনীতে যোগদান করেছে
চীনা ই-কমার্স দৈত্যJingdongমার্কিন ব্যবসায়ীরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পণ্য বিক্রি করতে সহায়তা করার জন্য ওটাওয়া ভিত্তিক শফিের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।